QORSHE LAGU YAREYNAYO FATAAHAADAHA WEBIGA SHABEELLE OO DOWLADDU WADDO - Awdinle Online
QORSHE LAGU YAREYNAYO FATAAHAADAHA WEBIGA SHABEELLE OO DOWLADDU WADDO
November 23, 2019 (Awdinle Online) – Siciid Xuseen Ciid Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dib u dayactir ku sameynayso ilaa 10 kanaal oo ku yaala gobolada Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe, si loo yareeyo fatahaadda ka dhasha Webiga Shabeelle.
Wasiirka Beeraha dowladda Federaalka Siciid Xuseen Ciid ayaa Warbaahinta u sheegay in dayactirka kanaaladan loo adeegsan doono yareynta Fatahaadaaha uu sameeyo Webiga Shabeelle.
“Waxaan dhameystirnay kanaalka weyn Birimo sugundaariyo ee ku yaala Gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana hadda qorsheyneynaa in Wasaaraddu ay dib u dayactir ku sameyso shan kanaal oo gobolka Shabeelaha Dhexe ah iyo shan Shabeelada Hoose in la dayactiro, waana tobanka kanaal ee ugu waa weyn” ayuu yiri Wasiirka Beeraha.
Wasiirka Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xusay in sababta ugu weyn ee uu fatahaadda ku sameyo Webiga Shabeelle ay tahay in webiga uu aasmay oo carro ay ka buuxsantahay.
“Dhowr siyaabood ayuu Webiga Shabeelle fatahaad ku sameeyaa, tan koowaad waa webiga oo aasmay, isla markaana aan muddo helin wax dayactir ah, tan labaad oo ah in biyaha webiga meelo qaldan laga furo oo ay sameeyaan biyo baxo, taasi oo ay inta badan adeegsadaan argagixisada Al-Shabaab oo difaac ka dhiganeysa” ayuu hadalkiisa ku daray Wasiirka.
Previous articleMa dhabbaa in DP World ay Dekedda Berbera ka Dhigayso Marinka ugu Muhiimsan ee Geeska Afrika
Next articleWasaaradda Beeraha oo beenisay daraasad ay samaysay Jaamacad ku taala Waqooyiga Ireland